Tonon Kiran'i Solomona 5 - Baiboly Masina [Malagasy Bible 1865] - (ToSo 5)
Tonon Kiran'i Solomona 5
Efa tonga eto an-tsahako aho, ry havako ampakariko; Mioty ny miorako mbamin'ny zava-manitro aho; Efa homana ny toho-tanteliko mbamin'ny tanteliko aho, ary efa misotro ny divaiko mbamin'ny rononoko; Homàna ianareo, ry sakaizako, misotroa, eny, mivokisa divay, ry malala.
[Teny nataon'ny ampakarina sy ny mpanjaka ary ny zanakavavin'i Jerosalema] Natory aho, nefa nahatsiaro ihany ny foko; Injay! ny feon'ny malalako, izay mandondòna ka manao hoe: Vohay aho, ry havako ampakariko, Ry voromailalako, ilay ahy tsy misy kilema; Fa vonton'ando ny lohako, Ny voloko milantolanto dia kotsan'ny andon'ny alina.[Heb. ampakariko]
Fa hoy izaho: Efa niala akanjo aho, ka hataoko ahoana indray no fiakanjo? Efa nioza tongotra aho, ka hataoko ahoana no fandoto azy?
Nampiditra ny tànany teo amin'ny loaka ilay malalako, dia nangorakoraka azy ny foko.
Nitsangana hamoha varavarana ny malalako ihany aho, ary nitete miora ny tanako, eny, ny rantsan-tanako nitete ranon'ny miora teo amin'ny famohana ny hidin-trano.
Namoha varavarana ny malalako aho, kanjo efa nihodina izy ka lasa; Very hevitra aho tamin'ny nitenenany; Nitady azy aho, fa tsy nahita; Niantso azy aho, fa tsy novaliany.
Nahita ahy ny antily izay mandehandeha eny an-tanàna, dia nikapoka ka nandratra ahy; Ny mpiambina ny manda nanala ny lamba fisaronako.
Mampianiana anareo aho, ry zanakavavin'i Jerosalema: Raha mba hitanareo re ny malalako, dia ahoana no holazainareo aminy? Lazao fa mararim-pitia aho.
Inona ny malalanao mihoatra noho ny malala sasany, ry tsara tarehy amin'ny vehivavy? Inona ny malalanao mihoatra noho ny malala sasany, no dia mampianiana anay toy izao ianao?
Ny malalako dia sady fotsy mangatsakatsaka no mena, notsongaina tamin'ny alinalina.
Ny lohany dia toy ny tena volamena tsara; Ny volony dia milantolanto sady mangilohilo toy ny goaika.
Ny masony dia tahaka ny voromailala eo anilan'ny sakeli-drano, mandro amin'ny ronono sady tahaka ny vato soa alatsaka an-tranontranony izy.
Ny takolany dia tahaka ny tanim-boninkazo misy zava-manitra eo an-tsaha, dia tahaka ny tany navosaina misy voninkazo manitra. Ny molony dia tahaka ny lilia sady mitete ranon'ny miora.[Heb. tilikambo]
Ny tenany dia tahaka ny anja-bolamena voaisy krysolita; Ny tenany dia tahaka ny ivory voarafitra tsara sady misarona safira;
Ny ranjony dia tahaka ny andry vatosanga miorina amin'ny faladia tena volamena; Ny tarehiny dia tahaka an'i Libanona, tsara toy ny sedera.[marmora fotsy]Mamy dia mamy ny vavany, eny, maha-te-ho-tia avokoa izy. Toy izany ny malalako, ary toy izany ny sakaizako, ry zanakavavin'i Jerosalema! [Heb. lanilaniny]
Mamy dia mamy ny vavany, eny, maha-te-ho-tia avokoa izy. Toy izany ny malalako, ary toy izany ny sakaizako, ry zanakavavin'i Jerosalema! [Heb. lanilaniny]
Tonon Kiran'i Solomona 5:1
Tonon Kiran'i Solomona 5:2
Tonon Kiran'i Solomona 5:3
Tonon Kiran'i Solomona 5:4
Tonon Kiran'i Solomona 5:5
Tonon Kiran'i Solomona 5:6
Tonon Kiran'i Solomona 5:7
Tonon Kiran'i Solomona 5:8
Tonon Kiran'i Solomona 5:9
Tonon Kiran'i Solomona 5:10
Tonon Kiran'i Solomona 5:11
Tonon Kiran'i Solomona 5:12
Tonon Kiran'i Solomona 5:13
Tonon Kiran'i Solomona 5:14
Tonon Kiran'i Solomona 5:15
Tonon Kiran'i Solomona 5:16
Tonon Kiran'i Solomona 1 / ToSo 1
Tonon Kiran'i Solomona 2 / ToSo 2
Tonon Kiran'i Solomona 3 / ToSo 3
Tonon Kiran'i Solomona 4 / ToSo 4
Tonon Kiran'i Solomona 5 / ToSo 5
Tonon Kiran'i Solomona 6 / ToSo 6
Tonon Kiran'i Solomona 7 / ToSo 7
Tonon Kiran'i Solomona 8 / ToSo 8